Onyankopɔn Tumidi—Ɛbɛma Ntɛnkyea Nyinaa To Atwa | Bɛn
‘So Onyankopɔn Bu Ntɛnkyea?’
1. Ɔkwan bɛn so na ntɛnkyea a wobu nkurɔfo no betumi aka yɛn?
WƆASISI aberewa kunafo bi agye ne sika a wasie ne nkwa nna nyinaa. Ɛna tirimɔdenfo bi akɔtow ne ba akokoaa a onnim hwee akyene. Wɔde ɔbarima bi ato afiase wɔ bɔne a ɛnyɛ ɔno na ɔyɛe ho. Woyɛ w’ade dɛn wɔ nsɛm a ɛtete saa ho? Ɛda adi sɛ emu biara haw w’adwene, na ntease wom. Nnipa wɔ nea ɛteɛ ne nea ɛnteɛ ho nkate a emu yɛ den. Sɛ wobu ntɛnkyea a, ɛhyɛ yɛn abufuw. Yɛpɛ sɛ wɔpata nea wɔasisi no no, na wɔtwe ɔbɔnefo no aso. Sɛ wɔanyɛ eyi a, ebia yebebisa sɛ: ‘So Onyankopɔn hu nea ɛrekɔ so no? Dɛn nti na ɔnyɛ ho biribi?’
2. Ɔkwan bɛn so na Habakuk yɛɛ n’ade wɔ ntɛnkyea ho, na dɛn nti na Yehowa ankasa antia no wɔ eyi ho?
2 Wɔ abakɔsɛm nyinaa mu no, Yehowa asomfo anokwafo abisa nsɛm a ɛtete saa ara. Sɛ nhwɛso no, odiyifo Habakuk bɔɔ Onyankopɔn mpae sɛ: “Ɛdɛn nti na woma mehwɛ ntɛnkyea a ɛyɛ hu saa? Dɛn nti na woma basabasayɛ, amumɔyɛ, nsɛmmɔnedi, ne atirimɔdensɛm trɛw kɔ baabiara?” (Habakuk 1:3, Contemporary English Version) Yehowa ankasa antia Habakuk wɔ nokwasɛm a obisae no ho, efisɛ ɔno Yehowa na ɔde atɛntrenee ho adwene hyɛɛ nnipa mu. Yiw, Yehowa de n’atɛntrenee a emu dɔ no kakra ahyɛ yɛn mu.
Yehowa Kyi Ntɛnkyea
3. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ Yehowa nim ntɛnkyea a ɛrekɔ so no ho nsɛm sen yɛn koraa?
3 Yehowa nyɛ obi a obu n’ani gu ntɛnkyea so. Ohu nea ɛrekɔ so no. Ɛdefa Noa bere so ho no, Bible ka kyerɛ yɛn sɛ: “[Yehowa, NW] hui sɛ nnipa bɔne dɔɔso pii asase so, na wɔn komam adwene nyinaa yɛ bɔne nko daa nyinaa.” (Genesis 6:5) Susuw nea saa asɛm no kyerɛ no ho hwɛ. Ntɛnkyea ho adwene a yɛwɔ no taa gyina nsɛm kakraa bi a ebia yɛate anaa nea yɛn ankasa ahyia so. Nanso, Yehowa nim ntɛnkyea a ɛrekɔ so wɔ wiase nyinaa no. Ohu ne nyinaa! Nea ɛsen saa no, otumi hu nneɛma a koma tɔ kɔ so—nsusuwii a ɛmfata a ɛma nnipa yɛ amumɔyɛde no.—Yeremia 17:10.
4, 5. (a) Ɔkwan bɛn so na Bible da no adi sɛ Yehowa dwen wɔn a wɔabu wɔn ntɛnkyea no ho? (b) Ɔkwan bɛn so na wɔabu Yehowa ankasa ntɛnkyea?
4 Nanso, Yehowa yɛ pii sen ntɛnkyea a ohu ara kwa. Odwen wɔn a wɔapira wɔn no ho nso. Bere a aman a wɔtan Yehowa nkurɔfo yɛɛ wɔn ayayade no, “wɔn ahawfo ne wɔn taafo anim apinisi” no hyɛɛ no awerɛhow. (Atemmufo 2:18) Ebia woahyɛ no nsow sɛ dodow a nnipa binom hu ntɛnkyea no, dodow no ara na ɛho nsɛm nhaw wɔn pii bio. Ɛnte saa wɔ Yehowa fam! Wahu ntɛnkyea biara a akɔ so bɛyɛ mfirihyia 6,000 ni, nanso ɔda so ara kyi denneennen. Ampa, Bible ma yɛn awerɛhyem sɛ okyi nneɛma te sɛ “atoro tɛkrɛma,” “nsa a ehwie mogya a edi bem gu,” ne “ɔdansekurumfo a ohuw atosɛm.”—Mmebusɛm 6:16-19.
5 Susuw sɛnea Yehowa kasa tiaa Israel akannifo a na wobu ntɛnkyea denneennen no nso ho hwɛ. Ɔde honhom kaa ne diyifo no ma obisae sɛ: ‘So ɛnyɛ mo na ɛsɛ sɛ muhu atɛntrenee?’ Bere a Yehowa kyerɛkyerɛɛ wɔn tumi a wɔde di dwuma ɔkwammɔne so mu fann wiei no, ɔkaa nea ɛbɛba mmarima a wɔn bra asɛe yi so ho asɛm siei sɛ: “Wobesu afrɛ [Yehowa, NW], na ɔremmua wɔn, na ɔde n’anim behintaw wɔn bere no mu, sɛnea wɔmaa wɔn nsɛnni yɛɛ bɔne no.” (Mika 3:1-4) Hwɛ sɛnea Yehowa kyi ntɛnkyea! Hwɛ, ɔno ankasa ahu bi! Satan abɔ no ahohora wɔ ɔkwan a ɛmfata so mfirihyia mpempem pii ni. (Mmebusɛm 27:11) Afei nso, atɛnkyea a ɛsen biara a wɔabu, bere a wokum Yehowa Ba a “wanyɛ bɔne” no sɛ ɔbɔnefo no, ɛkaa ne koma. (1 Petro 2:22; Yesaia 53:9) Ɛda adi pefee sɛ, ɛnyɛ ade a Yehowa nhu wɔn a wobu wɔn ntɛnkyea no amanehunu no, na saa ara na ommu n’ani ngu so.
6. Sɛ wobu yɛn ntɛnkyea a, ɔkwan bɛn so na yebetumi ayɛ yɛn ade, na dɛn ntia?
6 Nanso, sɛ yehu ntɛnkyea—anaasɛ wɔne yɛn ankasa anni no yiye a—ɛnyɛ nwonwa sɛ yɛbɛko atia denneennen. Wɔbɔɔ yɛn Onyankopɔn suban so, na ntɛnkyea ne Yehowa su nhyia ɔkwan biara so. (Genesis 1:27) Ɛnde, dɛn nti na Onyankopɔn ma ntɛnkyea ho kwan?
Onyankopɔn Tumidi Ho Ɔsɛmpɔw No
7. Kyerɛkyerɛ sɛnea wotwaa Yehowa tumidi mpoa no mu.
7 Asɛmmisa yi ho mmuae fa tumidi ho ɔsɛmpɔw no ho. Sɛnea yɛahu no, Ɔbɔadeɛ no wɔ hokwan sɛ odi asase ne wɔn a wɔte so nyinaa so. (Dwom 24:1; Adiyisɛm 4:11) Nanso, wotwaa Yehowa tumidi mpoa wɔ adesamma abakɔsɛm mfiase. Ɛyɛɛ dɛn na eyi bae? Yehowa hyɛɛ onipa a odi kan, Adam, sɛ onnni dua bi a esi turo a na ɛyɛ ne Paradise fie no mu no so aba. Na sɛ wantie ɛ? Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ: “Owu na wubewu.” (Genesis 2:17) Ná Onyankopɔn ahyɛde no remma Adam anaa ne yere, Hawa, ho nkyere no. Nanso, Satan maa Hawa gye dii sɛ Onyankopɔn yɛ katee dodo. Sɛ odi dua no aba a, dɛn na na ɛbɛba? Satan ka kyerɛɛ Hawa pefee sɛ: ‘Ɛnyɛ owu na mubewu: na Onyankopɔn nim sɛ da a mubedi bi no, mo ani bebue, na moayɛ sɛ Onyankopɔn ahu papa ne bɔne.’—Genesis 3:1-5.
8. (a) Dɛn na na Satan nam nsɛm a ɔkeka kyerɛɛ Hawa no so repɛ akyerɛ? (b) Dɛn na Satan gyee ho kyim wɔ Onyankopɔn tumidi ho?
8 Wɔ asɛm yi mu no, na ɛnyɛ sɛ Satan rekyerɛ sɛ Yehowa de asɛm bi a ɛho hia asie Hawa kɛkɛ, na mmom na ɔrekyerɛ nso sɛ Yehowa adi atoro akyerɛ no. Satan hwɛɛ yiye sɛ ɔrennye nokwasɛm a ɛyɛ sɛ Onyankopɔn wɔ tumi no ho kyim. Nanso, ogyee fata a ɛfata ne teɛ a ɛteɛ no ho kyim. Ɔkwan foforo so no, ɔkyerɛe sɛ ɛnyɛ nea Yehowa de Ne tumi redi dwuma wɔ ɔkwan a ɛteɛ na ɛso bɛba Ne nkoa mfaso asen biara so.
9. (a) Dɛn na Adam ne Hawa asoɔden a wɔyɛe no de baa wɔn so, na nsɛmmisa a ɛho hia bɛn na eyi ma ɛsɔree? (b) Dɛn nti na Yehowa ansɛe atuatewfo no kɛkɛ?
9 Enti, Adam ne Hawa nyinaa yɛɛ Yehowa so asoɔden denam dua a wɔabara no aba a wodii bi no so. Wɔn asoɔden no ma wɔfatae sɛ wɔde owu twe wɔn aso sɛnea na Onyankopɔn ahyɛ no. Atoro a Satan dii no maa nsɛmmisa bi a ɛho hia sɔree. So Yehowa wɔ hokwan sɛ odi adesamma so ampa, anaasɛ ɛsɛ sɛ onipa ankasa di ne ho so? So Yehowa de ne tumi di dwuma wɔ ɔkwan a ɛfata sen biara so? Anka Yehowa betumi de ne tumi a ɛsen biara no asɛe atuatewfo no amonom hɔ ara. Nanso, na nsɛmpɔw a ɛsɔree no mfa Onyankopɔn tumi ho, na mmom ne nniso. Enti Adam, Hawa, ne Satan a na Onyankopɔn beyi wɔn afi hɔ no remma teɛ a ne nniso teɛ no nna adi. Mmom no, anka ebetumi ama asɛm foforo mpo asɔre wɔ ne nniso ho. Ɔkwan biako pɛ a na wobetumi afa so ahu sɛ ebia nnipa betumi adi wɔn ho so yiye a Onyankopɔn ho nnim ne sɛ ɔbɛma bere abɛsen.
10. Dɛn na abakɔsɛm ada no adi wɔ nnipa nniso ho?
10 Dɛn na mmere a abɛsen kɔ no ama ada adi? Nnipa de mfirihyia mpempem pii asɔ nniso ahorow pii ahwɛ, a ebi ne katabaako nniso, dodow amammu, kwasafo amammu, ne komunis nniso. Nea afi ne nyinaa mu aba ne Bible mu asɛm no hyia pefee: ‘Onipa adi onipa so tumi ma adan no bɔne.’ (Ɔsɛnkafo 8:9) Ntease wom sɛ odiyifo Yeremia kae sɛ: “[Yehowa, NW], mahu sɛ onipa kwan nni ne nsam, enni ɔbarima nsam, sɛnea ɔnam a obetutu n’anammɔn.”—Yeremia 10:23.
11. Dɛn nti na Yehowa ama adesamma abusua ahu amane?
11 Ná Yehowa nim fi mfiase sɛ adesamma ahofadi, anaa di a wobedi wɔn ho so no de amanehunu pii na ɛbɛba. Ɛnde, so na ɛnteɛ sɛ ɔmaa nea na ɛbɛba no ho kwan? Ɛnte saa koraa! Sɛ yɛbɛyɛ mfatoho a: Fa no sɛ wowɔ ɔba bi a ɛsɛ sɛ wɔyɛ no oprehyɛn de sa ɔyare bi a ebetumi akum no. Wuhu sɛ oprehyɛn no bɛma abofra no ate yaw kɛse, na eyi ma wo werɛ how yiye. Bere koro no ara no, wunim sɛ oprehyɛn no bɛma wo ba no anya apɔwmuden wɔ n’asetram akyiri yi. Saa ara na na Onyankopɔn nim—na ɔka siei mpo—sɛ hokwan a ɔde ama nnipa no de ɛyaw ne amanehunu bi bɛba. (Genesis 3:16-19) Ná onim nso sɛ, gye sɛ wama adesamma nyinaa ahu aba bɔne a atuatew asow no ansa na wɔanya ahotɔ a ɛte hɔ daa na mfaso wɔ so. Saa kwan yi so na na wobetumi asiesie ɔsɛmpɔw no koraa akosi daa.
Onipa Mudi Mu Kura Ho Ɔsɛmpɔw No
12. Sɛnea wɔakyerɛkyerɛ mu wɔ Hiob asɛm no mu no, sobo bɛn na Satan abɔ nnipa?
12 Asɛm yi ho ade foforo wɔ hɔ. Bere a Satan twaa fata a Onyankopɔn nniso fata ne teɛ a ɛteɛ mpoa no, na ɛnyɛ Yehowa tumidi nko na watwiri; otwirii Onyankopɔn asomfo nso wɔ wɔn mudi mu kura ho. Sɛ nhwɛso no, hyɛ no nsow sɛ, Satan kaa ɔtreneeni Hiob ho asɛm kyerɛɛ Yehowa sɛ: “So ɛnyɛ wo na woabɔ ɔno ne ne fi ne ade a ɔwɔ nyinaa ho ban ahyia? Ne nsa ano adwuma woahyira so, na n’afieboa ase afɛe asase no so. Na afei teɛ wo nsa ka nea ɔwɔ nyinaa hwɛ, sɛ ɔrennome anaa!”—Hiob 1:10, 11.
13. Dɛn na na Satan nam sobo a ɔbɔɔ Hiob no so repɛ akyerɛ, na ɔkwan bɛn so na eyi fa nnipa nyinaa ho?
13 Satan kyerɛe sɛ na Yehowa de Ne tumi a ɛbɔ nneɛma ho ban no retɔ Hiob ma wasom no. Na nea eyi kyerɛ ne sɛ na Hiob mudi mu kura no yɛ nyaatwom adeyɛ, ɛne sɛ biribi a na obetumi anya afi Onyankopɔn hɔ nkutoo nti na na ɔsom no. Satan kyerɛe sɛ sɛ Hiob hwere Onyankopɔn nhyira a, na saa ɔbarima no bɛdome ne Bɔfo no mpo. Ná Satan nim sɛ Hiob yɛ soronko, “odi mu na ɔteɛ, osuro Onyankopɔn, na oyi ne ho fi bɔne ho.” * Enti sɛ Satan tumi sɛee Hiob mudi mu a okura no a, dɛn na na ɛbɛkyerɛ ama adesamma a aka no? Ɛno nti, na Satan regye wɔn a wɔpɛ sɛ wɔsom Onyankopɔn nyinaa nokwaredi ho kyim. Nokwarem no, bere a Satan retrɛw asɛm no mu no, ɔka kyerɛɛ Yehowa sɛ: ‘Nea onipa [nyɛ Hiob nko] wɔ nyinaa, ɔde ma pere ne kra.’—Hiob 1:8; 2:4.
14. Dɛn na abakɔsɛm ama ada adi wɔ sobo a Satan bɔɔ nnipa no ho?
14 Nea ɛne asɛm a Satan kae no bɔ abira no—abakɔsɛm ada no adi sɛ nnipa pii te sɛ, Hiob, kɔɔ so dii Yehowa nokware wɔ ɔtaa mu. Wɔn nokwaredi no ama Yehowa koma atɔ ne yam, na eyi ama Yehowa anya biribi abua mpoa a Satan de ahomaso twae sɛ sɛ nnipa hyia ahokyere a wobegyae Onyankopɔn som no. (Hebrifo 11:4-38) Yiw, nnipa komapafo annan wɔn akyi ankyerɛ Onyankopɔn. Bere a tebea horow a emu yɛ den ma wɔhawee no, wɔde wɔn ho too Yehowa so kɛse ma ɔmaa wɔn ahoɔden de gyinae.—2 Korintofo 4:7-10.
15. Asɛmmisa bɛn na ebetumi asɔre wɔ ntɛn a Onyankopɔn buu no tete ne nea obebu daakye no ho?
15 Nanso, ɛnyɛ tumidi ho nsɛmpɔw ne onipa mudi mu kura ho nko na Yehowa bu atɛntrenee. Bible ka atɛn a Yehowa abu ankorankoro ne aman mũ nyinaa mpo ho asɛm kyerɛ yɛn. Atɛn a obebu no daakye ho nkɔmhyɛ ahorow nso wom. Dɛn nti na yebetumi anya ahotoso sɛ Yehowa adi asɛntrenee wɔ n’atemmu mu na ɔbɛkɔ so ayɛ saa?
Nea Enti a Onyankopɔn Atɛntrenee Kyɛn So
Yehowa ‘rempra ɔtreneeni ne ɔbɔnefo mmom’ ngu da
16, 17. Nhwɛso ahorow bɛn na ɛkyerɛ sɛ nnipa nni nhumu pii wɔ nokware atɛntrenee ho?
16 Wobetumi aka afa Yehowa ho ma afata sɛ: “N’akwan nyinaa yɛ trenee.” (Deuteronomium 32:4) Yɛn mu biara ntumi nka sɛ saa na yɛte, efisɛ mpɛn pii na nhumu a yenni sɛe nea ɛteɛ ho adwene a yɛwɔ no. Sɛ nhwɛso no, susuw Abraham ho hwɛ. Ɔpaa Yehowa kyɛw wɔ Sodom sɛe ho—ɛmfa ho amumɔyɛsɛm pii a na ɛrekɔ so wɔ hɔ no. Obisaa Yehowa sɛ: “So wobɛpra ɔtreneeni ne ɔbɔnefo abom agu anaa?” (Genesis 18:23-33) Nokwarem no, na mmuae no yɛ dabi. Ɛyɛ bere a ɔtreneeni Lot ne ne mmabea no duu Soar dwoodwoo no ansa na Yehowa “tɔɔ sufre ne gya” fii soro guu Sodom. (Genesis 19:22-24) Yona nso “bo fuwii” bere a Onyankopɔn huu Niniwefo mmɔbɔ no. Esiane sɛ na Yona adi kan aka wɔn sɛe ho asɛm nti, na anka ɛbɛyɛ no anigye sɛ obehu sɛ wɔatɔre wɔn ase—ɛmfa ho sɛ na wɔada ahonu a efi komam adi no.—Yona 3:10–4:1.
17 Yehowa maa Abraham awerɛhyem sɛ N’atɛntrenee a obu no mfa abɔnefo sɛe ho nko na mmom treneefo nkwagye ho nso. Ɔkwan foforo so no, na ɛsɛ sɛ Yona hu sɛ Yehowa yɛ mmɔborohunufo. Sɛ abɔnefo sakra wɔn akwan a, ‘ɔde firi wɔn.’ (Dwom 86:5) Esiane sɛ Yehowa nte sɛ nnipa a wonni ahotoso no nti, ommu atɛn mfa nna ne tumi adi kɛkɛ, na saa ara na ɔmfa mmɔborohunu nkame afoforo esiane sɛ osuro sɛ wobebu no sɛ ɔyɛ mmerɛw nti. Nea ɔyɛ ne sɛ ɔbɛda mmɔborohunu adi bere biara a ɛfata sɛ ɔyɛ saa no.—Yesaia 55:7; Hesekiel 18:23.
18. Fi Bible mu kyerɛ sɛ ɛnyɛ nkate mu kɛkɛ na Yehowa fi yɛ ade.
18 Nanso, Yehowa mfi nkate mu mmu n’ani ngu nneɛma so. Bere a Yehowa nkurɔfo de wɔn ho hyɛɛ abosonsom mu fee no, ɔkaa no denneennen sɛ: “Mabu wo w’akwan so atɛn, na mede w’akyide nyinaa aba wo so. Na m’aniwa renkyɛe wo so, na merenhu mmɔbɔ, na w’akwan na mɛma aba wo so.” (Hesekiel 7:3, 4) Enti sɛ nnipa sen wɔn kɔn wɔ wɔn akwan ho a, Yehowa bu wɔn atɛn sɛnea ɛfata. Nanso, n’atemmu gyina adanse a edi mu so. Enti, bere a Sodom ne Gomora “nteɛm” kɛse duu Yehowa asom no, ɔkae sɛ: “Meresian makɔhwɛ sɛ wɔayɛ sɛnea nteɛm a edu me nkyɛn no te anaa; na sɛ ɛnte saa a, mahu.” (Genesis 18:20, 21) Hwɛ sɛnea yɛn ani betumi agye sɛ Yehowa nte sɛ nnipa pii a wɔde ahopere bu atɛn ansa na wɔatie nokwasɛm a ɛwom nyinaa no! Nokwarem no, sɛnea Bible ka Yehowa ho asɛm no, ɔyɛ “nokware Nyankopɔn na nkontompo nni no mu.”—Deuteronomium 32:4.
Nya Yehowa Atɛntrenee Mu Ahotoso
19. Sɛ yɛwɔ ɔkwan a Yehowa fa so bu atɛntrenee ho nsɛm a ɛkyere yɛn adwene a, dɛn na yebetumi ayɛ?
19 Ɛnyɛ biribiara a Yehowa yɛe tete no na Bible ka ho asɛm; saa ara na ɛmfa sɛnea Yehowa bebu ankorankoro ne nnipakuw atɛn daakye ho nkyerɛkyerɛmu nyinaa mma. Sɛ Bible mu nsɛm anaa nkɔmhyɛ bi a ɛho nkyerɛkyerɛmu a ɛte saa nni hɔ kyere yɛn adwene a, yebetumi ada nokwaredi a Mika a ɔkyerɛw eyi daa no adi no bi adi: “Mɛtwɛn me nkwagye Nyankopɔn no.”—Mika 7:7.
20, 21. Dɛn nti na yebetumi anya ahotoso sɛ Yehowa bɛyɛ nea ɛteɛ bere nyinaa?
20 Yebetumi anya ahotoso sɛ tebea biara mu no, Yehowa bɛyɛ nea ɛteɛ. Sɛ ɛte sɛ nea nnipa bu wɔn ani gu ntɛnkyea so mpo a, Yehowa hyɛ bɔ sɛ: “Me na aweredi wɔ me, me ara metua ka.” (Romafo 12:19) Sɛ yɛtwɛn a, yɛbɛda gyidi a emu yɛ den a ɔsomafo Paulo daa no adi no bi adi sɛ: “So Onyankopɔn bu atɛnkyea? Dabida!”—Romafo 9:14, NW.
21 Saa bere yi, yɛte “mmere a emu yɛ den” mu. (2 Timoteo 3:1) Ntɛnkyea ne “nhyɛso” ama wɔayɛ nkurɔfo ayayade pii. (Ɔsɛnkafo 4:1) Nanso, Yehowa nsakrae. Ɔda so ara kyi ntɛnkyea, na odwen wɔn a wɔyɛ wɔn basabasa no ho yiye. Sɛ yɛkɔ so gyina Yehowa ne ne tumidi akyi a, ɔbɛma yɛn ahoɔden a yɛde begyina akodu bere a wahyɛ a obesiesie ntɛnkyea nyinaa wɔ N’ahenni nniso ase no.—1 Petro 5:6, 7.
^ nky. 13 Yehowa kaa Hiob ho asɛm sɛ: “Obiara nni hɔ a ɔte sɛ ɔno asase no so.” (Hiob 1:8) Ɛnde, ɛda adi sɛ Hiob traa ase wɔ Yosef wu akyi ansa na Mose rebɛyɛ Israel kannifo a wɔapaw no. Enti, saa bere no na wobetumi aka sɛ obiara nni hɔ a odi mũ sɛ Hiob.
Deuteronomium 10:17-19 Dɛn nti na yebetumi anya ahotoso sɛ Yehowa nhwɛ nnipa anim wɔ ne nsɛnnii mu?
Hiob 34:1-12 Sɛ wobu wo ntɛnkyea a, ɔkwan bɛn so na Elihu nsɛm no betumi ahyɛ ahotoso a wowɔ wɔ asɛntrenee a Onyankopɔn di no mu den?
Dwom 1:1-6 Dɛn nti na abotɔyam wom sɛ wubehu sɛ Yehowa susuw treneefo ne abɔnefo nneyɛe ho yiye?
Malaki 2:13-16 Yehowa tee nka dɛn wɔ sisi a wosisii mmea a wɔn kununom faa ɔkwan a enni nnyinaso so gyaee wɔn aware no ho?
Momma yɛnkɔ Bible mu nkɔhwɛ Onyankopɔn atemmu a ɔde baa nkurɔfo so no mu abien, na yebenya asɛmmisa yi ho mmuae. Ɛno ne Noa bere so Nsuyiri ne Kanaanfo a Onyankopɔn tɔree wɔn ase no.
Wode Wo Ho Bɛto Onyankopɔn So?
Wopɛ sɛ wuhu anigye a ɛwɔ Onyankopɔn adamfofa mu a, kenkan saa asɛm yi.